Ama-Peps Coir Mattress | Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. I-PEPS CoIR Maystren iRayysson iRaysson ineqembu labasebenzi benkonzo ababhekele ukuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-Intanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo seLogistics, kanye nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola imininingwane eminingi kulokho, kungani futhi senza kanjani, zama umkhiqizo wethu omusha - upende matilande we-coir, noma ungathanda ukuzwa kuwe. Ukuculwa kweRayway kuhlanganisa inqubo ehlukahlukene . Inqubo yokukhiqiza iqukethe iphethini, ukusakazeka, ukusika, ukuthunga nokuqeda.
Kusukela kusunguliwe, iRaysonn ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule isikhungo sethu se-R & D sesakhiwo somkhiqizo kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo.
Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufike ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende.